Shirka Golaha Wasiiradda Soomaaliya oo lagu qabanayo Puntland | allsaaxo online
Shirka Golaha Wasiiradda Soomaaliya oo lagu qabanayo Puntland
Magaalada Garowe ee caasimada dawlada Puntland ayaa waxaa ka socda Munaasibad lagu soo dhawaynayo dhamaan xubnaha golaha wasiirada dawlada federalka Soomaaliya kuwaasoo ku wajahan Caasumada Puntland ee Garowe.
Khamiista soo socota ayaa magaalada Garowe waxaa ka dhacaya kulan dhexmaraya Golayaasha wasiirada ee Puntland iyo Soomaaliya kuwaasoo dhamaan looga dhagaysan doono Khudbado ku Aadan halka ay wax marayaan.
Wasiiradda wasaaradaha kaladuwan ee Puntland ayaa diyaarinaya warbixino ay ka horjeedin doonaan xubnaha golaha wasiirada ee dawlada federalka Soomaaliya kuwaasoo kala qayb galaya kulankooda Khamiista soo socota.
Dhankale Xubno kamid ah Bulshada Rayidka iyo Baarlamanka ayaa ka qayb galaya kulanka labada Wasiiro ee Puntland iyo Soomaaliya.
Shirka Golayaasha wasiirada ee Soomaaliya iyo Puntland waxaa Shir gudoomin doonaa Raysal wasaaraha dawlada federalka Soomaaliya Mudane Xassan Cali Khayre.
Ugu danbayn dawlada Puntland ayaa diyaarinaysa goobtii qaadi lahayd dhamaan wasiirada iyo wasiiro ku xigeenada Soomaaliya iyo Puntland ee kulanka ku yeelanaya Caasumada Puntland ee Garowe.